Mattermost Desktop: Imwe nzira kuSlack yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Chokwadi unoziva Slack, tsime, pane yakavhurwa sosi uye yega-inomiririra imwe nzira inozivikanwa se Mattemost. Anokurumidza mameseji kunyorera iyo inopihwa seye gore sevhisi (SaaS) uye izvo zvinokutendera iwe kuti utsvage uye uwane kwavari kubva chero kupi. Uyezve, chishandiso ichi chakanyorwa muGolang uye React, ichimhanya seyakajairika bhinari yeLinux distros futi.
Iyo ine rezinesi pasi peMIT, uye inoshandisa MySQL kana Postgres. Uye kana izvo zvikasakuudza chero chinhu, pane zvikonzero zvinoverengeka nei Mottermost inopfuura Slack, senge kugona kugona zvikwata zvakawandisa, mameseji tambo, tsvaga hashtag, fomati yeMarkdown, rutsigiro rwemitauro yakawanda, kumisikidza gore rakavanzika, madingindira, mazita ehunyanzvi echiteshi, kujekesa syntax, nezvimwe.
Kana zvakadaro izvo zvakakosha maficha kuti iwe uzive nezve Zvakanyanya kumira pachena:
Es inoenderana neSlack, saka zvichaita kuti hupenyu hwako huve nyore kana iwe uri kutoshandisa chikuva icho uye uchida kukwakuka kusvika kuMattermost.
Iyo ine kunyorera kwe mapuratifomu akasiyana yemidziyo nhare, pamwe neyekuzvarwa webhu uye desktop vhezheni yeLinux (Mattermost Desktop). Naizvozvo, unogona kuva nayo paWindows, Android, iOS, macOS uyezve paLinux.
Kutumirwa kuri nyore, manejimendi uye kugadzirisa. Inogona kumhanyisa sebhinari paLinux, pamwe nemufananidzo weDocker, nezvimwe. Muchokwadi, zvirokwazvo inowanika mune repos yeyaunofarira distro, kana mune zvekushandisa zvitoro kana software nzvimbo, kuti iwe ugone kuzviisa nyore kwazvo.
Una nharaunda huru shanda kuvandudza uye kubatsira kana uchizvida.
Kubatanidzwa nehuzhinji hwe zvishandiso kana zvinoshandiswa, saJira, IRC, XMPP, Hubot, Giphy, Jenkins, GitLab, Trac, Redmine, SVN, RSS / Atom, uye zvimwe zvakawanda,
Kugoneka kwe gadzira uye ugovane zvako maapp uchishandisa maAPI uye madhiraivha ayo Mattermost anopa, nezvimwe.
Mamwe mashoko - Mattermost webhusaiti yepamutemo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Mattermost Desktop: imwe nzira kuSlack yeLinux
Tinoenderera mberi tichitaura nezve keyboard. A inofanira kunge iine zvekuwedzera